Izingobo zomlando ze-CINEMA - Thumela RELAY
UKUPHILA KWEMPILO WEZOBUCIKO AMACEBISO nezinye amadili UKUZIJABULISA UMNOTHO
ICameroon imelwe ngokusemthethweni kwifilimu ethi "Black Is King"
ICameroon ibimelwe ngokusemthethweni kwifilimu ethi "Black Is King" nguNdlovukazi B, ngoba siphawula ubukhona bomlingisi uConstance Ejuma. UConstance Ejuma ubesevele eyi-ukuziqhenya ngo-237 ngokuvela ku- "Black Panther" ...
Thola izindaba ezijabulisayo zabalingisi ababili abadumile baseNigeria u-Aki noPaw Paw
Le ndatshana ikuthatha ukuthi uhlole impilo yangasese yabalingisi abadumile baseNollywood u-Osita Iheme ongas Paw Paw nomngani wakhe uChinedu Ikedieze alias Aki. U-Osita Iheme, owaziwa njengoPaw Paw, ungumlingisi, umbhali kanye…
UKatherine wenza u-Arnold Schwarzenegger abe umkhulu
Izindaba ezinhle ziyeza umndeni wakwaSchwarzenegger. UKatherine, indodakazi endala yomlingisi odumile u-Arnold Schwarzenegger, wabeletha ingane yakhe yokuqala futhi wonke umndeni washaya ihlombe. Incwajana yamaphepha epinki ngasohlangothini lwe ...
U-Alphonse Monzali, umlingisi wezobuciko, wanikezwa "indondo yegolide yokuphumelela kwezobuciko, ezesayensi kanye ...
NgoMgqibelo Agasti 8, 2020, u-Alphonse Monzali, u-Yabusele, umdidiyeli wehlaya, waklonyeliswa ngendondo yegolide yokuzijabulisa kwezobuciko, izifundo zesayensi kanye nezincwadi ngokushaywa kohambo lomyalo kazwelonke emtholampilo waseNgaliema. ...
"INollywood ligcwele abafana abathukile, abaculi nabaqwayizi.", Kwembula ...
Umlingisi waseNollywood uYemi Solade wabelana ngemicabango yakhe embonini yamafilimu aseNigeria ethi manje usugcwele abafana abathukile nabadwebi bezingoma kanye nezifebe. Umlingisi womakadebona owenze ...
UMuwado, intombazane eneminyaka eyisishiyagalombili eyenza wonke amaSomalia ahleke
Tchinde Agasti 7, 2020 1
Imidwebo emisha yamahlaya kaMogadishu's TikTok ne-YouTube idale izigidi zezigidi zokubukwa ezinyangeni ezimbalwa nje. Yonke indawo eMogadishu nangale, kunegama elenza abantu bamamatheke: Muwado. Intombazane eneminyaka eyisishiyagalombili ...
INetflix: Yimaphi ama-movie amasha nochungechunge okufanele ubuke ngo-Agasti 2020?
Kucishe kube ngu-Agasti futhi lokho kusho into eyodwa kuphela: kusalindelwe uhlelo olusha lweNetflix futhi lumnandi kakhulu! Isamba esiphelele! Uma ihlobo seligcwele futhi amaholide asevele eqalile abanye bethu, ...